महेन्द्रनगरको गुरुयोजना सार्वजनिक हुनुपर्छ | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
महेन्द्रनगरको गुरुयोजना सार्वजनिक हुनुपर्छ
दिशानिर्देश समाचार/महेन्द्रनगर, ७ वैशाख
महेन्द्रनगरको बस्ती बसाउने बेला र २०२८ सालमा महेन्द्रनगरको गुरुयोजना तयार भएको थियो । त्यो गुरुयोजनामा विज्ञहरुद्वारा २०३४ सालसम्म पनि वैधानिक संशोधन गरिएका थिए ।
सुरुको गुरुयोजनाको रेखांकन तथा लेखांकन सार्वजनिक हुनुपर्नेमा आजसम्म नगर विकास समिति भित्र रहेका पदाधिकारीहरु बाहेक र थप भूमाफिया बाहेक अरुलाई थाहा छैन्, तयस कारण सुरुको गुरुयोजना नगरपालिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विचारधारा प्रकट गर्नुहुन्छ हरिहर पाण्डेय तथा अन्य बुद्धिजीविहरु, कुनै पनि योजनाहरुको गुरुयोजना नबनाएर विकास निर्माणका कामहरु गर्न मिल्दैन, गरेपनि पछि भत्काउनुपर्छ, आज महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले गुरुयोजनाको वास्ता नै नगरी व्यक्तिगत मनपरी हिसाबले जग्गा खरिद विक्रि संरचना निर्माण गरिगराईराखेको छ, नगर क्षेत्रभित्र अनिवार्य रुपमा नक्सा पास नगराएर भवन निर्माण गर्न नदिनु भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो कानूनी व्यवस्था हुदाँ हुदै तपाई हामी सबैको सामुन्वयमा पुरानो वसपार्क एरिया, ओपेरा होटलको एरिया तथा अन्य क्षेत्रहरुमा मनपरी तरिकाले भवन निर्माण भईराखेका छन् ।
नगरपालिकाले नरोक्नुपर्ने कारण के हो ? यसको जवाफ भीमदत्त नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्नै पर्ने देखिन्छ । यदि नियम कानूनले तोकि दिएको काम नगरपालिकाले गर्दैन भने गराउन लगाउन संघ संस्था, व्यक्ति को हो ? खुलासा गरिदिनु पर्यो ।
गुरुयोजनाको बाटो विराएपछि संकट आउछ, त्यो संकटलाई टार्न झन भ्रष्ट काम गर्नुपर्छ । त्यसकारण समयमा नै गुरुयोजना कहाँ राखेको छ, को जिम्मा रहेको छ,त्यसको बारेमा सबै नेपालीले बुझ्न पाउने गरी सार्वजनिक हुनुपर्यो । यदि सार्वजनिक गर्ने होइन भने त्यसको विकल्प के छ ? गुरुयोजनाकै बदमासीले गर्दा बालुवाटार बेचिएको छ । भोली सितल निवास बेचिएल, पर्सि नायारणहिटी बेचिएला त्यसकारण यी सबैलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न गुरुयोजना सार्वजनिक हुनुपर्दछ ।
यहाँका जनताले या अरु कसैले पनि हेर्न चाह्यो भने सबैले हेर्न पाउनेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसको मूल कपिको आया कपि बनाएर एक प्रति जिल्ला प्रशासन, मालपोत तथा नगरपालिकामा सुमेत सुरक्षित रहनुपर्छ । यदि यस्तो गरिएन भने बालुवाटारको र सहरीविकासको जग्गा हट्पे जस्तो माईन कि कञ्चनपुर महेन्द्रनगरको नगर विकास समिति क्षेत भित्र पर्ने जग्गा समेत आज लुटाहामा परेको छ । यसतर्फ ध्यान गएको हामी पाउदैनौं । यदी यस्तै ख्याल ख्यालैमा विना अनुमति नक्सा पास बेगर भवन निर्माण गरेको यथावत रहने हो भने यसरी के जनताको सम्पत्ति संरक्षण रहेको मान्न सकिन्छ ?
कहिले ७ दिने म्याद दिने, कहिले १५ दिने म्याद, कहिले ३५ दिने म्याद राखेर खाली गरेर आफ्नो सरसामान उठाएर लैजाउ भन्नु अन्तमा फेरी विर्सनु र अल्मलाई राख्नु यो सरकारको बदनियत नै हो । आजभोली त झन, बालुवाटारको सरकारी जमिन समेत ठूला बडाले बेचविखन गरेको छ भने महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन त विक्रिकै लागि राखिएको हो भने हामीले किन किन्न नपाउने ? भनेर बनाएका भवनहरु निर्माणाधिनमा छन्, यो प्रक्रिया कहिलेसम्म रहने हो जव ब्रह्वदेव मण्डीको बजार महेन्द्रनगरमा सर्यो त्यसबेला जथाभावी सरेको होइन मास्टरप्लान गुरुयोजना बनाएर नै सरेको हो, त्यसकारण त्यो गुरुयोजनामा संरक्षक अञ्चालाधिश, नगर पंचायत, गाउँ पंचायतका पदाधिकारी र जिल्लम प्रशासनका पदाधिकारीहरुको सही छाप मात्र नभएर वन, मालपोत, भूमिसुधार सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जिल्लाका पदाधिकारीहरुको सहित छाप गरिएको गुरुयोजना आज कहाँ राखिएको छ, त्यसको छाया प्रति नेपाली जनताले हेर्न पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग रहेको छ । त्यसकारण देखाउन सकिने गरी नगरपालिकाले आफ्नो जिम्मामा लिई सुचना पाटीमा समेत नमेटिन गरी राख्नुपर्ने धारणा यहाँका जनताको रहेको छ ।
← हामी स्वाभिमानी बन्न चाहन्छौं
नयाँ वर्षका तरंगहरु →